Ebee zụrụ ekwentị mkpanaka China, saịtị tụkwasịrị obi - Septemba 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | China gam akporo, Mobiles
Ọnụ ọgụgụ na ekwentị dị iche iche anyị nwere ugbu a n'ahịa buru ibu, nke mere na mgbe anyị chọrọ ma ọ bụ mkpa ịgbanwe ọnụ anyị, ọ na-adịkarị ịnweta ezigbo ọgbaghara ebe ọnụahịa dị iche iche, agbanyeghị, uru nke dị elu na nke dị ala na-arịwanye elu karị, na ahịrị ahụ na-ekewa ala, ọkara, elu ma ọ bụ ọkwa dị elu, na-esiwanye ike.
Maka nke a, taa, na Androidsis anyị agaghị enye gị ndụmọdụ gbasara otu esi azụta ekwentị ndị China kacha mma ma ọ bụ ihe kachasị mma ama, ma ọ bụ ndị dị ọnụ ala ma ọ bụ ndị na-enye ego ka mma. Taa ọ baghị uru ụdị ekwentị mkpanaaka ịchọrọ, ma ọ bụ nke ịchọrọ maọbụ nke ị ga - azụ azụ, maka na taa ihe anyị ga - agwa gị bụ. ebe ịzụta kacha mma China mobiles Site na ahịa.
1 Mygha akụkọ ifo
2 Zụta na Spain ma ọ bụ zụta na China?
3 Na-echekwa na Spain na European nkwa
4 Zụta si na China
5 Zụrụ ndị kasị mma China mobiles ozugbo na weebụsaịtị nke ha emepụta
Mygha akụkọ ifo
Mgbe anyị na-ekwu maka ekwentị ndị China, enwere ọtụtụ ndị ka na-eche naanị maka nnomi, akwụkwọ adịgboroja na ngwaọrụ nke ịdị mma, agbanyeghị, ahịa a amalitela ọtụtụ na n'ọtụtụ ọnọdụ nke a abụghịzi ikpe. Ka anyị chee nwa oge banyere ụdị dịka Meizu, Huawei, Vivo, Oppo ma ọ bụ Xiaomi. Ha niile bụ ụlọ ọrụ na-agbanyeghị na ọ dịbeghị n'ọtụtụ mba ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa nwere mmasị na ya. Ihe kpatara ya dị mfe: ha amụtala imepụta ngwaọrụ dị mma mana karịa ihe niile, enwewo ike ikpokọta arụmọrụ dị mma na ọnụ ahịa bara uru karị karịa ndị ọzọ ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ dịka Samsung ma ọ bụ Apple.
N'aka nke ọzọ, ikwu maka "mbipụta" bụ azụmahịa aghụghọ. O doro anya na n'oge gara aga, ma ka dị ugbu a, a na-ebo ọtụtụ ụdị ebubo na ha na-edegharị ndị ọzọ (otu n'ime ikpe kachasị ọhụrụ na nke kachasị ama bụ OnePlus 5, nke ha na-ekwu na ọ nwere "nnweta ezi uche" na iPhone 7 Plus si Apple) Otú ọ dị, bụ akụkụ anọ akụkụ anọ a oyiri? Ndi ndokwa nke ihe oyiyi a nwere oyiri? Ndi gbara gburugburu enwere oyiri? Ọfọn, ebe m na-ahapụ ya.
Zụta na Spain ma ọ bụ zụta na China?
Mgbe ị na-ekpebi ebe ị ga-azụta igwe China kachasị mma, nnukwu ajụjụ bụ ma ị ga-eme ya na ụlọ ahịa na Spain ma ọ bụ na ụlọ ahịa n'ịntanetị na China. N'ụzọ bụ isi, ọdịiche dị n'etiti otu ma ọ bụ nhọrọ ọzọ na-emetụta akụkụ nke ọnụahịa na nkwa ahụ, agbanyeghị, ọ bụghị naanị akụkụ ndị anyị ga-atụle:
Na Chinese online ụlọ ahịa anyị ga-ahụ ọnụ ala Site na ahịa.
N'aka nke ọzọ, mgbe ịzụrụ n'ụlọ ahịa ndị China, anyị nwere ihe egwu na a ga-ejide ngwaahịa anyị na kọstọm, nke ga-apụta ịkwụ ụgwọ nwere ike ịbụ ihe ruru euro 40.
Mgbe ịzụrụ na Spain ma ọ bụ na mba EU ọ bụla, iwu nke ikike ndị ahịa. Ihe kachasị mkpa bụ na anyị ga-enwe oge opekempe nke ụbọchị 14 iji weghachite ngwaahịa ahụ n'efu, yana opekata mpe afọ abụọ maka nsogbu sitere na nrụpụta nrụpụta.
Na ozugbo metụtara n'elu bụ mgbe ahia gachara. Nwere ike iche n'echiche ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa China nke dị puku kwuru puku na kilomita site n'ime ọnwa asatọ?
Mgbe anyị na-azụta na China, ejikari anyị ga-echere n'etiti iri atọ na ọbụna iri isii ụbọchị na-enweta ngwaahịa n'ụlọ; Ọ bụrụ na anyị azụta ya na Spain, anyị nwere ike ịnweta ekwentị mkpanaaka n’echi ya.
Ozugbo ị jiri esemokwu ndị a kpọrọ ihe, naanị ị na-eme mkpebi mana agbanyeghị, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ebe kachasị mma ị nwere ike ịzụta ekwentị ndị China kacha mma, na Spain na mba ofesi.
Na-echekwa na Spain na European nkwa
Dị ka anyị kwuru na mbido, otu uru dị mkpa nke ịzụ ekwentị kacha mma China na ụlọ ahịa na ntanetị n'ịntanetị (ma ọ bụ dị na mba ọ bụla n'ime European Union), bụ na anyị ga-enwe mkpuchi nke akwụkwọ ikike maka opekempe oge nke afọ abụọ, dịka iwu obodo ndị na-azụ ahịa siri ike. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịme nloghachi nke ngwaahịa na enweghị ọnụ na enweghị inye nkọwa n'ime ụbọchị iri na anọ mbụ nke nzụta (ma ọ bụ ogologo oge nke onye na-ere ahịa guzobere).
Na nkwụghachi, ọnụahịa anaghị adịkarị ala Esi zụta na weebụsaịtị ndị China, agbanyeghị, anyị chere na anyị amaliteworị site na ọnụahịa ndị bara ezigbo uru, anyị ga-enwe nkwa ahụ anyị kwuru na kwa, anyị ga-enweta ọhụrụ anyị mobile ọtụtụ mbụ.
Offọdụ ụlọ ahịa ndị dị na Spain ebe ị nwere ike ịzụta ngwa ahịa China kachasị mma bụ ndị a:
Amazon. Obi abụọ adịghị ya, nnukwu ahịa ịntanetị bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji zụta ekwentị mkpanaka ọhụrụ anyị. Ọnụahịa ha na-abụkarị ndị bara uru na ahịa (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile), ị ga-enweta nkwa Amazon yana, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Prime, ị nwere ike ịnwe ya n'ụlọ n'efu n'efu n'echi ya. Na Amazon ị nwere ike ịchọta ụdị ngwaahịa China kachasị mma, ọ bụkwa ya mere na ọ bụ ụlọ ahịa ka anyị na-akwado gị n'ọtụtụ oge.
Fnac bụ onye ọzọ na-echekwa ebe i nwere ike inweta ụfọdụ nke kacha mma China mobiles. Dị ka ọ dị na Amazon, ọ bụrụ na ị bụ onye otu nke French a, ị ga-enwe mbupu n'efu. N’aka nke ọzọ, ọnụ ahịa ya anaghị abụkarị nhọrọ kachasị mma n’ahịa, ma ọ naghị enye ya ọtụtụ igwe eji eme ihe dịka Amazon. Otu n'ime akụkọ ya kachasị ọhụrụ bụ na ọ bụrụla onye na - ekesa Xiaomi onye nkesa, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ mkpanaka site na ụdị a, ọ bụ ebe dị mma ile anya.
Mgbasa ozi mgbasa ozi Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa nke eletrọniki, kọmputa na ndị na-ere ekwentị. Nakwa ebe a ị ga-enwe ike ịchọta ụdị mmesapụ aka dị iche iche nke igwe eji eji ego dị mma na ọnụahịa dị mma.
Ihe PC. N'agbanyeghị aha ya, onye na-ere spanish a dabere na Alhama (Murcia) ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa n'ịntanetị kachasị ama na mba anyị, ọ na-enyekwa ụfọdụ mobiles ndị China ị ga-enwe n'ụlọ n'echi ya.
Ike Planet Online. Anyị anaghị esikwa Murcia kwapụ n'ihi na n'obodo Alhama na Totana, e nwere otu ndị ọkacha mmasị m na-ere ahịa ekwentị China. Ha na-eje ozi na Spain niile, ha nwere ọnụahịa bara uru dị ukwuu, mbupu awara awara, ọrụ ahịa ha na-ere ahịa dị egwu ma ha na-enye otu n'ime ụdị ndị kachasị ukwuu na igwe China na ụdị ngwa ọ bụla. M na-ekwu na ahụmịhe. Nwere ike ịnweta ozugbo site na ebe a.
Ndụ Geek Ọ na-arụ ọrụ na Spain ka ị wee nwee nkwa mpaghara yana ọrụ ahịa mgbe erechara. Na mgbakwunye, na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị Have nwere nhọrọ ịhọrọ mbupu si China (dị ọnụ ala karịa) ma ọ bụ site na Spain na awa 48; Nwere ike idobere ngwaahịa ka ezitere gị ozigbo ha dị.
Zụta si na China
Zụta igwe okwu China kachasị mma na weebụsaịtị webụsaịtị China nwere uru dị mkpa nke na-akọwa ọganiihu ya: n'ọtụtụ oge, enye kacha mma ahịa na ahịa. Agbanyeghị, ọghọm ndị anyị kpọtụrụ aha na mbido bụ nke dị oke mkpa nke na anyị ga-amatarịrị banyere ha. Ya mere, a na m agwa gị ka bulite paragraf ole na ole ọzọ ma lelee ha nke ọma.
Nke ahụ kwuru, ụfọdụ ụlọ ahịa ndị China kachasị ewu ewu ebe ị nwere ike ịzụta ekwentị kacha mma China na ọnụahịa kachasị mma bụ:
Aliexpress A maara ya dị ka "ndị China Amazon". Na nke a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ị ga-ahụ ihe ọ bụla ekwentị mkpanaaka (na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile i nwere ike iche n’echiche) na ọnụ ahịa mara mma. Na mgbakwunye, nyere ha ịdị ukwuu, ha agaala ogologo iji nye ndị na-azụ ahịa nchekwa, ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ ndị ọrụ agaghị eso echiche a. Mana achọghị m ka ị chee na m na-achọ ịkparị ụlọ ahịa ndị a: na nke onwe m, ruo ugboro atọ enwetabeghị ngwaahịa m zụtara (gụnyere Xiaomi router) na ugboro atọ ego m laghachiri na-enweghị inye nkọwa ndị ọzọ.
Ìhè dị n’igbe ahụ Ọ bụ ụlọ ahịa ndị ọzọ a ma ama na ntanetị n'ịntanetị China; ụgbọ mmiri na-ebuga mba ọ bụla, gụnyere Spain, na katalọgụ gị ọ sara mbara n’ezie.
Kpoo Xtreme bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke China dị nnọọ ka nke gara aga, nwere ọtụtụ ekwentị na ngwa dị iche iche na ọnụ ahịa mara mma nke ukwuu.
Onye ọ bụla asịwo, nhọrọ ọzọ maka zụta mobile ọhụrụ gị n'ịntanetị ọnụahịa kacha mma.
Igogo Ọ bụ Peeji na spanish yana ezigbo nkwado mgbe ahịa gachara nke na-ekesa ngwaahịa n'ọtụtụ mba, gụnyere Spain.
Bang mma, otu ụlọ ahịa ndị na-ebuputa onyinye dị egwu, ọtụtụ n'ime anyị kwupụtara ebe a. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji zụta ndị China kachasị mma ma ọ bụrụ na ị kpebie ime ya na mba ọzọ. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe na Europe yabụ, ọ bụrụ na ha nwere ya na ngwaahịa, ịnwere ike ịnwe mkpanaka ọhụrụ gị n'ụlọ n'oge na-adịghị anya.
Zụrụ ndị kasị mma China mobiles ozugbo na weebụsaịtị nke ha emepụta
Nke a bụ otu n'ime nhọrọ kachasị nchebe anyị nwere agbanyeghị, ọ bụkwa otu n'ime ihe siri ike kemgbe ndị China ole na ole na-ere ọdụ ha ozugbo na mba ofesi, na ndị na-eme ya, dị na ọnụ ọgụgụ pere mpe nke mba. N'agbanyeghị nke a, ọ bụ ezigbo nhọrọ, ọkachasị ịnweta nkwalite ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ nkwado ọrụaka.
Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ndị na-emepụta ọrụ China nke nwere ọrụ a bụ ndị a:
Huawei. The kasị ibu emeputa ke China nwere a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Europe ebe anyị nwere ike ịzụta ọtụtụ ngwaahịa ha. Tụkwasị na nke a, ị ga-enwe ike ịkpọtụrụ ọrụ mgbe ịrechara ahịa na ọbụna ịlaghachi n'ime usoro na ọnọdụ ndị akọwapụtara.
Ọzọkwa Meizu na-eme ka Mbupu na ihe niile onye ọ bụla, ọ bụ ezie na ha na ngwaahịa abụghị mgbe niile kasị mma.
Onye ọzọ nke kachasị emepụta China, Oppo, nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị site na nke ọ na-ebuga mba dị iche iche, gụnyere Argentina, Colombia, Peru, Bolivia na Spain.
I nwekwara ike ịzụta ọtụtụ ọnụ ZTE na ya ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na Spen.
Dabere na Xiaomi, otu n'ime ndị na-ewu ewu na ndị na-ewu ewu na China mara amara na oge a naanị na-eme ka Mbupu ruo France, Germany, United Kingdom na United States. Isi ihe kpatara mmachi a bụ nsogbu patenti ị nwere ike ibute na mpaghara ndị ọzọ.
Ulefone, otu ụlọ ọrụ China nke na-apụta na ekwentị mkpanaaka nwere arụmọrụ dị mma yana ọnụahịa ndị dị ịtụnanya, nwekwara Peeji na spanish (na Bekee) nke ọ na-eje ozi na mba dị iche iche, gụnyere Spain.
Ugbu a na ị matara uru na ọghọm dị na ya mgbe ị na-azụ ngwa ahịa China kachasị mma n'ụlọ ahịa ndị China ma ọ bụ na Spain, mkpebi ahụ bụ naanị gị: You na-ahọrọ nkwa na ọsọ nke nnyefe ma ọ bụ ka ị na-ahọrọ ọnụahịa bara uru karị ma ị nwere ike ijikwa onwe gị na ndidi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ebee ka ịzụta mobiles ndị China
Ndewo, azụrụ m Blackview BV 8000 (6Gb nke RAM, nnukwu ekwentị) ozugbo na Spain na http://www.movileschinosespana.com, nhọrọ dị mma maka ndepụta gị, ebe ha bụ ndị Blackview na Xiaomi Agents. Daalụ
Zaghachi Javier Mesa
Ahụm m nwere na Powerplanetonline, ọnwa ole na ole gara aga azụrụ m xiaomo Mi A1, ha were ihe karịrị akaụntụ ahụ, ekwesịrị m imegharị ndị ozi niile n'ihi na mbupu m apụtaghị, ike ụgbọ elu enyeghị m nọmba ọnụọgụ, ọ bịarutere n'oge ma ọ bịarutere, ụbọchị 5/10 / 2018, ana m arịọ maka mbadamba, ụbọchị 8 ha na-ekwupụta mbupu, ụbọchị 9 na ntinye na-egosi na ihe mere, ụbọchị 10 ha nyere m igbe efu, ụlọ ọrụ na-ebugharị na-ekwu na ha nyere m kedu ikike ụgbọelu na-eziga, ọ bụrụ na ọ bụ igbe efu ... Ọfọn, Igbe efu… .. Ana m ekwu na ọ bụghị tipsa ma ọ bụ ụgbọ mmiri ka m tụfuru lost 200 ekele powerplanet …… Site na ha anaghị aza ekwentị , e nwere mana enwere ndekọ na-adịgide adịgide, ozi ịntanetị, mgbe ha chọrọ ha zara gị, mgbe ha achọghị…. Mba Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ma ọ bịakwute gị, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ihe agahie… .. Chọọ maka ndụ gị, agaghị m azụta n'aka ha ọzọ, ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na ụlọ ahịa ọzọ…. Agaghị m azụta, ndị ohi n'etiti otu na nke ọzọ.
Zaghachi Maria Victoria